Iimpawu kunye nokukhangelwa kwamanqaku kumxholo:entsha
Abahlali baseLlandwrog banyusa i- $ 460,000 yokuthenga iTy'n Llan pub
Malunga nabantu abayi-1 000 bathembisa imali ukunceda abantu belali ukuba bathenge indawo yabo yentselo.
Uthembisa ukusebenzisa imali yolwaphulo-mthetho ukubuyisela amaxhoba ngobuqhetseba
Uvavanyo lubonisa ukuba intshukumo enjalo iya kuduma, kodwa imali efumanekayo ayinakwanela.
Amalungu eNkulumbuso-fumana ikheshi yasimahla kunye nezibonelelo ngezi zithembiso zi-7 zoSuku lweNkulumbuso
Njengoko onke amalungu eNkulumbuso esazi, i-Amazon Prime Day isondela ngokukhawuleza ngoku-ngaphantsi kweeveki ezimbini enyanisweni. Yintoni amalungu eNkulumbuso mhlawumbi angayazi, nangona kunjalo, zingaphi izithembiso zePrime Day ezikhethekileyo kubo kwaye ziyafumaneka ngoku. Sibone i-7 yokuqala y
Inkxaso yokumakisha isondele
Inkxaso yeMarkdown ikufuphi kwi-Intanethi yoBhaliso lwe-Intanethi yokuBhala kwesiQinisekiso soMhleli woHlaziyo: Ifomathi entsha yongezwa ngeebhulethi, isibindi kunye neetalics ngu- @ RichardJohnn # sloggingNode. js Vs Flask: esebenza ngcono ngu @ radleylewis # nodejs Dive kwi-DevSecOps: uHeroku Flow
Uyenza njani i-portal yomsebenzisi enokungeniswa nge-sync inc kunye nokusabela
Uyenza njani i-Portal yoMsebenzisi kwi-Airtable nge-Sync Inc kunye neReactAirtable sisixhobo esikhulu solawulo lweprojekthi yamashishini. Ungayiseta ukuba ilandelele iiprojekthi, imisebenzi, amalungu eqela, kunye nezinto ezinokuhanjiswa, kodwa iAirtable ayinayo indlela enkulu yokwabelana ngokukhusel